Obama oo cunaqabateynta hubka ka qaaday dalka Vietnam
Madaxweynaha Mareykanka oo booqasho ku jooga dalka Vietnam ayaa ku dhawaaqay inuu ka qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarneyd dalkaas oo waqti ahaayeen labo dal oo cadaw isku ah.
Obama “Dagaal u dhaxeeya ma jirto Mareykanka iyo Islaamka”
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in weerarkii arbacadii la soo dhaafay ka dhacay gobolka California ee lagu dilay 14 ruux uu ahaa weerar argagixiso.
Obama oo khudbad u jeediyay in ka badan 500 oo dhalinyaro ka kala yimid Wadamada Afrika
Madaxweyne Obama oo dhamaadka bisha July booqan doona dalka Itoobiya
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa noqon doona Madaxweynihii u horeeyay oo booqan doona dalka Itoobiya, sida lagu sheegay war ka soo baxay Aqalka cad ee Mareykan.
Madaxweyne Obama oo cambaareeyay toogashada labo sarkaal boolis oo ka dhacday Ferguson
Iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha ka taagan magaalada Ferguson, kadib toogashadii sanadkii hore oo Askari Caddaan Mareykan ah u geystay wiil dhalinyaro madow aan hubeysneyn, ayaa dhacdadii u dambeysay waxaa habeen hore lagu dhaawacay labo sarkaal boolis ah.
BARACK OBAMA: Waxaan naga go’an burburinta kooxda Islaamiga ah ee ISIS
Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama ayaa sheegay inuu cagta marin doono kooxda islaamiyiinta ah ee ISIS, isagoo xusay inaysan Mareykanka qorshaha ugu jhirin inuu ciidammo lugta ah geeyo dalka Ciraaq.